Tag: nchịkọta ọdịnaya | Martech Zone
Tag: nchịkọta ọdịnaya
Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị na-etinye ego na mmepe nke ọdịnaya, ị ga-ahụ nchịkọta nchịkọta ọkọlọtọ karịa nkụda mmụọ. Ndị a bụ ihe ole na ole… ndị edemede, edemede, ụbọchị mbipụta na nkpado. Enwere ajụjụ a kapịrị ọnụ nke ụlọ ọrụ gị jụrụ nke ị na-enweghị ike ịza: Kedu ọdịnaya anyị bipụtara na ọnwa a rụrụ nke kacha mma? Kedu onye edemede na-eme ka ọtụtụ okporo ụzọ gaa na saịtị anyị? Kedu akara ngosi kachasị ewu ewu? Kedu ụdị ọdịnaya kachasị ewu ewu?
Spundge na-eme ka ọ dị mfe iji soro kacha mma ọmụma, distill ihe ọmụma, na-etolite na-akpali echiche, na ike mmetụta ọdịnaya. Ha nwere ma mbipute nweere onwe ha na ụdị ọrụ ọkachamara nke nyiwe ha. Spundge PRO bụ nyiwe ọdịnaya nke na-enyere ndị otu na ndị mmadụ aka ịchọpụta, idozi, mepụta na kesaa ọdịnaya na-emetụta, mmetụta. Spundge na-enye gị ohere iji: Sochie - Sochie ọdịnaya kachasị mma, nke ọma edebere n'ime Akwụkwọ ndetu site na isiokwu, mmemme, ndị mmadụ ma ọ bụ usoro ọ bụla nke
N'ebe ọrụ m, anyị na-eji Salesforce dị ka ngwa ọrụ mmekọrịta ndị ahịa anyị (CRM). Ahịa bụ otu n'ime usoro ndị ahụ dị egwu nke nwere ike ịme ihe ọ bụla, mana ọ na-achọkarị mbọ iji rute ebe ahụ. Otu n'ime nnukwu mbọ m na-ahụ ka Salesforce na-aga n'ihu bụ mkpesa ojiji ịre ahịa email na-ezigara ndị ọrụ ọ bụla kwa ọnwa. Akụkọ ndị ahụ na-enye nghọta ụfọdụ n'akụkụ nke ngwa ahụ ha na-etinye na ya